Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay deegaanka Godod – Radio Daljir
Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay deegaanka Godod
Oktoobar 26, 2017 1:35 g 6
Wararka ka imaanaya duleedka magaaladda Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa halkaas saaka uu dagaal xoogan ku dhexmaray ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug. Wararka illaa iyo hadda aan helayno waxa ay sheegayaan in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan.
Illaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyeey 6 dhimasho ah, halka dhaawacu labaataneeye kor u dhaafay.
Ciidamada Galmudug iyo waliba ciidamo sheegtay Al-Shabaab ayaa illaa iyo biloowga sannadkan 2018 waxa ay si joogto ah dagaal lala beegsanayo ciidamada Puntland uga wadeen bariga Gaalkacyo, siiba Godad, Ballibusle, Gacnafale, iyo Jeexdin. Sidii loo doortay Madaxweyne Xaaf marnaba ma ay istaagin dagaalada bariga Gaalkacyo, Madaxweyne Xaaf asna waxba kama oran. Sidoo kale Madaxweyne Gaas oo taageeray Madaxweyne Xaaf in uu weli yahay Madaxweynaha Galmudug ayaa asna waxba ka oran dagaalada joogtada ka noqday bariga Gaalkacyo. Madaxweyne Gaas ayaa hadda ah Madaxa Dowlad Goboleedyada ku midoobay Kismaayo oo Puntland iyo Galmudug qayb ka yihiin
Dagaalada iyo xaaladda Mudug iyo Galmudug waxaa si aan gabbad laheyn hore uga hadlay Oday Cabdiqaybdiid oo ah Xildhibaan Aqalka Sare, asaga oo dhammaadkii bishii Siteenbar khudbad uu ka jeediyey Cadaado ku sheegay in “Al-Shabaab ay sannadkii 7-8aad ka ilmadhashay degmooyin badan oo Galmudug ah, welina aan war la iska oran.”
Daljir kala soco faahfaahinta dagaalka iyo waraysiyo.
Dekedda Bossaso oo maalintii labaad hawlgab ah (dhegayso)
Hay’adda Care oo Kulan Wacyigalina Ku qabatay Magaaladda Gaalkcyo (dhegayso+Sawiro)
Anas Cali Cabdile 3 years ago
Pudland godka al shabaab
Marwo Xalimo Sacdyo 3 years ago
galmudug waaa bahalo galeen
Axmed Macalin Siciid 3 years ago
Dljir joojiya qab yaalada nuqo dhex dhexad
Xasan Mohamed 3 years ago
nacalad hakuugadhacdo dagal ooga iyo isku darkadadweyna ha